Isicelo somnikelo | Umbutho Wokukhuthaza iNkcubeko yeWadi ye-Ota
Inkxaso evela kuye wonke umntu iya kuxhasa ubugcisa bezenkcubeko kwiOta Ward kwaye ikhokelele ekudalweni kwedolophu yenkcubeko enomtsalane-
Umbutho Wokukhuthaza Inkcubeko kwiWadi ye-Ota ubandakanyeke kwiiprojekthi ezahlukeneyo ukwenza igalelo ekuvuseleleni iwadi yase-Ota kunye nokudala idolophu yenkcubeko enomtsalane ngobugcisa bezenkcubeko.
Siza kuyisebenzisa le minikelo siyifumanayo ukuze abantu abaninzi benze amathuba okunxibelelana nenkcubeko kunye nobugcisa.
Ke ngoko, sicela inkxaso kunye nenkxaso ukulungiselela injongo yemisebenzi yethu.
UToshiaki Uejo, uMongameli, uMbutho wokukhuthaza iNkcubeko yeWadi
Okokuqala, nceda unxibelelane nathi.Siza kukwazisa malunga nenkqubo.
Ifom yesicelo somnikelo
Iminikelo kumbutho wethu ilungele izikhuthazi zerhafu.Imbuyekezo yokugqibela yerhafu iyafuneka ukuze ufumane unyango olukhethwayo.Ukongeza, xa kugcinwa ingxelo yokugqibela yerhafu, kufuneka "iSatifikethi seRisiti yoMnikelo" esikhutshwe nguMbutho.
Unokukhetha ukufumana ukuncitshiswa komrhumo njengokuncitshiswa kwengeniso okanye ukuncitshiswa komrhumo okhethekileyo njengekhredithi yetax, yeyiphi eyona ilunge ngakumbi.Ngeenkcukacha, nceda ubhekise kwiziko lewebhu le-NTA.
Unokufanelekela irhafu yokuhlala kunye nokuncitshiswa kwerhafu.Irhafu yokuhlala komntu iphathwa ngokwahlukileyo ngokuxhomekeke kwiwadi, isixeko, idolophu kunye nelali, ke nceda ujonge kwiwadi yakho, isixeko, idolophu, okanye ilali.
Iphepha lasekhaya leArhente yeRhafu
Unokutsala unciphiso ngokwahlukileyo kumrhumo jikelele.Ngeenkcukacha, nceda ubhekise kwiziko lewebhu le-NTA.